August 4, 2019 - ThutaStar
အဖေကို သေအောင်လုပ်ပီး အမေကို ရောဂါရအောင်လုပ်တဲ့ စုန်းမတဲ့ ( ဗီဒီယိုဖိုင် )
August 4, 2019 Thuta Star 0
သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်ဆန်းတွေကို မယုံကြည်ရင်တောင် မစော်ကားနဲ့လို့ ရှေးလူကြီးတွေပြောတာ ကြားမိပါတယ်…. လောကကြီးမှာ ၃၁ ဘုံရှိပြီး. အဲဒီဘုံထဲမှာ ကောင်းတာတွေလည်းပါသလို.. မကောင်းတဲ့ ဘုံဘဝက သတ္တဝါတွေလည်းရှိပါတယ်…. ကျွန်တော်တို့ ငယ်စဉ်ကတည်းက ကြားဖူးနားဝရှိနေတဲ့ နာမည်ကတော့ ” စုန်း ” ပါ…. သျီခင်းကျွတ်ညွေမှာဆို စုန်း မီးတောက်တယ်ဆိုပြီး ညသန်းခေါင်အချိန်ထိ […]
သားကို ဆေးကုသဖို့ အများကထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ ငွေတွေကို ဖခင်က ပြည့်တန်ဆာတွေနဲ့ပျော်ပါးဖို့ ခိုးယူခဲ့…
သားဖြစ်သူကိုဆေးကုသဖို့ အများကထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ ငွေကိုပြည့်တန်ဆာတွေနဲ့ပျော်ပါးကာ မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲဖို့အတွက် ခိုးယူသုံးစွဲခဲ့တဲ့ဖခင် ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့ MATEUS ALVES လို့အမည်ရတဲ့သူဟာ ရှားပါးတဲ့ရောဂါဝေဒနာကိုခံစားနေရတဲ့သူ့ရဲ့သားလေးအတွက် ဆေးကုဖို့ လူအများက ထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ ငွေတွေကိုခိုးယူကာ ပြည့်တန်ဆာတွေနဲ့ပျော်ပါးဖို့နဲ့ မူးယစ်ဆေးတွေကိုဝယ်ယူသုံးစွဲဖို့အတွက် အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ သူဟာဘာအလုပ်မှမလုပ်တဲ့ အလုပ်လက်မဲ့တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အသက် ၁၉လရှိပြီဖြစ်တဲ့ ရှားပါးတဲ့ရောဂါဝေဒနာကိုခံစားနေရတဲ့သူရဲ့သားလေးအတွက် မိသားစုဝင်တွေနဲ့ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေ၊ အခြားကူညီပေးကြတဲ့သူတွေက […]
မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာတင် လူကြိုက်များသွားခဲ့တဲ့ ရွှေမှုံရတီရဲ့ “ချစ်တယ်” သီချင်းသစ်
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာကတည်းက အောင်မြင်မှုတွေ များစွာဆွတ်ခူးရရှိထားတဲ့ မင်းသမီးချောလေး ရွှေမှုံရတီက လက်ရှိမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲမင်းသမီး တစ်ဦးဖြစ်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေမှုံရတီက အသက်(၂၀) အရွယ်မှာ နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် ရွှေထူးနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပြီး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုလေးကို တည်ဆောက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေမှုံရတီက အခုလက်ရှိမှာတော့ သူမရဲ့ အိမ်ထောင်သည်ဘဝလေးကိုလဲ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာကောင်းအောင် […]
သေကွဲ ကွဲခဲ့ရတဲ့ အဆိုတော်လေးနဲ့ မော်ဒယ်ကောင်မလေး ရဲ့ ကြေကွဲစရာ ဖြစ်ရပ်
အရမ်းချစ်ကြပြီးမှ သေကွဲ ကွဲခဲ့ရတဲ့ အဆိုတော်လေးနဲ့ မော်ဒယ်ကောင်မလေး ရဲ့ ကြေကွဲစရာ ဖြစ်ရပ် Janica Nam Floresca နဲ့ Franco Hernandez ဟာ ဖိလစ်ပိုင်ရဲ့ ဆယ်လီ အတွဲ တစ်တွဲ ဖြစ်ပြီး မြင်သူတကာ အားကျ လောက်တဲ့ စုံတွဲတစ်တွဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ […]
အလှူအတန်းမှာ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦး စိတ်ရောကိုယ်ပါ ရက်ရက်ရောရော လှူဒါန်းနိုင်ကြတဲ့ လင်းလင်းနဲ့ ချစ်သုဝေတို့ နှစ်ဦးဟာ အမြွှာ သမီးလေး အမည်တွေနဲ့ ခေတ်သစ်ဖောင်ဒေးရှင်းဆိုပြီး ထူထောင်ထားပါသေးတယ်။ ထိုဖောင်ဒေးရှင်းတွေကနေပြီးတော့ အသက် (၅) နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေကို ဦးစားပေးပြီး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေ ပေးလျက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်နဲ့သစ်လို့ ချစ်စနိုးခေါ်နေကြတဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းကျော်နှစ်ယောက်ကလည်း TV […]
တံတားပေါ်မှ ဧရာဝတီမြစ်ထဲ ခုန်ချသွားခဲ့တဲ့ လူငယ်လေး ပြန်တွေ့ပါပြီ
တံတားပေါ်မှ ဧရာဝတီမြစ်ထဲ ခုန်ချသွားခဲ့တဲ့ လူငယ်လေး ပြန်တွေ့ပါပြီ ( “ကျွန်တော် က သေရမှာ သိပ်ကြောက်ခဲ့တာ…မင်းမရှိပဲ ရှင်သန်ရမှာကိုတော့ ပိုကြောက်တယ် 🙃” ဆိုပြီး ခုန်ချသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်) 2.8.2019 ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီခန့်က ဧရာဝတီတံတား ရတနာပုံ စစ်ကိုင်းဘက်ခြမ်းတွင် ခုန်ချသွားသော […]
သုံးနေကျထက် လျှော့သုံးစရာမလိုဘဲ တကယ်ပိုက်ဆံစုမိစေမယ့် နည်းလမ်း (၅)မျိုး..
လူတော်တော်များများက ၀င်သမျှ ပိုက်ဆံအားလုံးကုန်ကုန်နေပြီး ပိုက်ဆံမစုမိလို့ စိတ်ဓာတ်ကျနေတတ်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံမစုမိတဲ့ ပြဿနာက လူတိုင်းလိုလိုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီး ၀င်ငွေနည်းလို့ဆိုတာထက် မစုတတ်လို့ မစုမိကြတာပါ။ ဒါကြောင့် ၀င်ငွေဘယ်လောက်ပဲရှိရှိစုဖြစ်အောင်စုမယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချပြီး အခုဖော်ပြတဲ့နည်းလေးတွေအတိုင်း ပိုက်ဆံစုလိုက်ရအောင်။ (၁) ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း ပိုက်ဆံစုရတာကို စိတ်မရှည်ဘူး၊ မစုချင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေက ၀င်ငွေရဲ့ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကို […]
နာရီပိုင်း အရွယ်သာ ရှိသေးတဲ့ ကလေးငယ်လေးကို မြင့်မားတဲ့ အပူချိန်အောက်မှာ စွန့်ပစ်ခဲ့ (ရုပ်သံ)
ဒီအဖြစ်အပျက်ကတော့ အင်္ဂါနေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကလေးငယ်လေးကိုတော့ Terrell Phillips လို့အမည်ရှိသူက တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမတုန်းကတော့ စောင်နဲ့ပတ်ထားတာလေးက တိရစ္ဆာန်(သို့)အမှိုက်တစ်ခုလို့ ထင်နေခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ သို့ပေမယ့် စိတ်ထဲကသိကအောင့်ဖြစ်ပြီး သွားကြည့်ခဲ့မိရာ ချက်ကြိုးဖြတ်ထားခါစ မသန့်ရှင်းရသေးတဲ့ ကလေးငယ်ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရှိခဲ့ရတာပါ။ ကလေးကတော့ မိန်းကလေးလို့ သိရှိရပါတယ်။ တွေ့တွေ့ချင်းမှာပဲ ၉၁၁ ကိုဖုန်းခေါ်ပြီး အကြောင်းကြားခဲ့တာပါ။ […]
ရေချိုးနေတဲ့အလှကို မကွယ်ဝှက်ပဲ ထင်ထင်ရှားရှားကြီး ပြသခဲ့တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
အနုပညာလောကမှာ နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာ အောင်မြင်စွာနဲ့ ရပ်တည်နေနိုင်တဲ့ မင်းသမီးချောလေး သင်ဇာဝင့်ကျော်က တစ်နေ့တစ်ခြား အောင်မြင်မှုတွေ များစွာ ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသူလေး တစ်ဦးပါ။ သင်ဇာဝင့်ကျော်ရဲ့ အလန်းစားဖက်ရှင်တွေကလည်း ပရိသတ်တွေ စိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်ကြတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး အားပေးမှုကို ရရှိထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်လည်း သင်ဇာဝင့်ကျော်က အားပေးသူ ပရိသတ်အများအပြားနဲ့ အနုပညာလောကမှာ ထိပ်ဆုံးက […]
အရမ်းချစ်ကြပြီးမှ သေကွဲ ကွဲခဲ့ရတဲ့ အဆိုတော်လေးနဲ့ မော်ဒယ်ကောင်မလေး ရဲ့ ကြေကွဲစရာ ဖြစ်ရပ်..
အရမ်းကို လိုက်ဖက်တဲ့ အတွဲ တစ်တွဲ ဖြစ်ပြီး အရမ်းကို ချစ်ကြလွန်းလို့ မီဒီယာပေါ်မှာ ခဏခဏ ဖော်ပြခြင်း ခံရတာကြောင့် မြင်သူ တကာက မနာလို လောက်အောင် ဖြစ်ကြပါတယ်။ မကြာခဏ ဆိုသလို သူတို့ရဲ့ နေ့စဉ် လှုပ်ရှားမှု လေးတွေ၊ နှစ်ယောက် စလုံး ကြည်နူးစရာ […]